रोजगार कार्यक्रमबाट साढे चार हजारलाई रोजगारी - Aarthiknews
रुकुमपश्चिममा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा साढे चार हजार बढीले रोजगारी पाएका छन् । संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जिल्लाका साढे चार हजार बढी बेरोजगारले केही दिनको रोजगारी पाएका हुन् ।
एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सय दिनको रोजगारीमा सहभागी नभएका बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार अर्थात कम्तीमा एक सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जिल्लामा बेरोजगारले बढीमा २० देखि २५ दिनसम्मको रोजगारी पाएका छन् ।
खानेपानी, भवन, शौचालय, खेलमैदान, गारेटो बाटो, सडक मर्मतसहित क्वारेन्टाइन निर्माणसम्ममा बेरोजगारलाई रोजगारी दिइएको छ । स्थानीय तहले छनोट गरेका बेरोजगारमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गत वर्ष जिल्लाभरमा दुई हजार ४१३ र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई हजार २६७ गरी कूल चार हजार ६८० जनाले रोजगार पाएका हुन् ।
मुसिकोट नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ४५० र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २८३, चौरजहारी नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १०३ र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २८७ तथा आठबीसकोट नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ३०० र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २०० बढीले रोजगारी पाएका छन् ।
त्यस्तै बाँफिकोट गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सात÷सात सय बढी, त्रिवेणी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ५४५ र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६१३ तथा सानीभेरी गाउँपालकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २४६ र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २५२ जनाले केही दिनको रोजगारी पाएका छन् ।
कम्तीमा एक सय दिनको रोजगारी दिने भनिएपनि जिल्लामा बढी रोजगारी पाउनेले २० देखि २५ दिनको मात्र रोजगारी पाएका छन् । बजेट कम भएको र वेरोजगारको संख्या बढी भएका कारण सबैलाई रोजगारी दिनुपर्दा वेरोजगारहरुले कमै दिन रोजगारी पाएको मुसीकोट नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नरविर खड्काले बताए ।
त्यस्तै, यो वर्ष लकडाउनका कारण बेरोजगारको सुचिमा सूचिकृत भएका भन्दा अरु व्यक्तिले पनि काम गरेकाले भने जति रोजगारी दिन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । मुसीकोट नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु. ७१ लाख ८० हजार र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु. ६४ लाख बजेट खर्च गरेको छ ।
चौरजहारी नगरपालिकाले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु. एक करोड तीन लाख ७८ हजार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु. ३८ लाख २६ हजार तथा आठबीसकोट नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु. ६६ लाख ८९ हजार र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु ६४ लाख ४० हजार खर्च गरेको जनाएको छ ।
बाँफिकोट गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री रोजगारका लागि रु एक करोड तीन लाख ७२ हजार र प्रधानमन्त्री रोजगारका लागि रु. ४२ लाख ८८ हजार, त्रिवेणी गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगारका लागि रु. ५६ लाख ३६ हजार र मुख्यमन्त्री रोजगारका लागि रु. ३६ लाख चार हजार १० तथा सानीभेरी गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री रोजगारमा रु. ६४ लाख र प्रधानमन्त्री रोजगारमा रु. ५३ लाख ७२ हजार खर्च गरेको छ ।